Home Wararka Laftagareen & Guudlaawe oo ku gacan seyray Farmaajo “In aay soo xulaan...
Laftagareen & Guudlaawe oo ku gacan seyray Farmaajo “In aay soo xulaan Xil. Aqalka Sare” iyadoo aanu heshiis jirin
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku cadaadinaya Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada saddexda ah ee ku sugan magaalada Muqdisho inay dib ugu laabtaan xarumahooda ayna si dhaqso ah ku bilaabaan doorashada Aqalka Sare.
Kulan uu la qaatay Madaxweyne Farmaajo saddexdan madaxweyne Maamul goboleed uuna goobjoog ka ahaa ra’iisul wasaare Rooble ayuu si toos ah uu ugu sheegay inay waajib tahay in la bilaabo doorashada Aqalka Sare kahor 8-da Febraayo ee sanadkan oo ku eg mudada xil haynta Madaxweyne Farmaajo.
Guudlaawe & Laftagareen ayaa ka biyo diiday una sheegay MW Farmaajo in aanay sameyn karin Doorasho aan la dhameyn, isla markaana aanay bilaabeynin xulista Xildhibaanada Aqalka Sare iyadoo aan heshiis laga gaarin hannaanka Doorashada
Farmaajo ayaa caro kala dul dhacay labadaas masuul, iyadoo aan la ogeyn sidii loo bilaabi lahaa doorashada Aqalka Sare iyadoo aysan ka dhacayn doorashada Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Qoor Qoor ayaa isaga ku adkeystay in uu bilaabo xulista Xildhibaanada Aqalka Sare, waxaana jira isfaham waa ka dhex jira Baarlabaanka GM oo intooda aay ka soo horjeedaan in aay soo xulaan Xildhibaanada Aqalka Sare iyadoo aan laga heshiin nidaamka Doorashada.
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha iyo weliba Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka digey in la qabto doorasho hal dhinac ah oo aan la isku raacsanayn,horena beesha caalamka ee dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto doorasho loo wada dhan yahay.